Vaovao - Ny dividends entin'ny tavoahangy vera kely dia hanimba ny indostrian'ny fitaratra sinoa manontolo?
Ny dividends entin'ny tavoahangy vera kely dia hanimba ny indostrian'ny fitaratra sinoa manontolo?
Raha ny vaovao, ny fihenan'ny periphery dia misy fiantraikany ratsy amin'ny ampahany iray, noho izany dia nisokatra ambany ny tsena araka ny nomanina ary nihanalefaka;
Raha ny momba ny volan'ny varotra, dia manohy mitazona ny haavon'ny hazavana isika alohan'ny fetibe, ary tsy matanjaka ny fahavononana amin'ny varotra renivohitra.Efa hiditra ny volana jolay isika izao.Milaza zavatra maromaro mendrika hodinihina izahay:
1. Tamin'ity herinandro ity, fizaram-baovao 15 no nisoratra anarana, anisan'izany ny fizarana vaovao 4 ao amin'ny biraon'ny siansa sy ny fanavaozana, ny birao lehibe 1, ny vatosoa 3 ary ny fizarana vaovao 7 voafantina ao amin'ny birao fahatelo vaovao;
Ny birao fahatelo vaovao dia fantatra amin'ny hoe "fandresena 100%", ary tsy maintsy misy ny vola miandry.Ankoatra izany, tsy ilaina ny manome ny sandan'ny tsena ho an'ny birao fahatelo vaovao, fa ny vola famandrihana dia mila aloa feno rehefa vaovao, ary ny fotoana mangatsiaka dia 2 andro;
Raha jerena ny tokonam-baravaran'ny 1 tapitrisa, ny vola vaovao dia tokony ho vola lehibe.Ao anatin'ny fotoana fohy dia hisy fiatraikany mandeha ra kely amin'ny renivohitra A-share;
2. Tamin'ny volana Jolay, 16,659 lavitrisa ny ampahany voarara dia nesorina tamin'ny fivezivezena, miaraka amin'ny sandan'ny tsenan'ny fivezivezena mitentina 478,752 lavitrisa yuan, ka ny 40% amin'ireo dia ny birao momba ny siansa sy ny fanavaozana;
Amin'ny indostria, ny indostria manana sandan'ny tsena lehibe indrindra amin'ny fanesorana ny fandrarana dia fanafody, mahatratra 91.2 lavitrisa.Ny haavon'ny fanafoanana ny fandraràna tamin'ity indray mitoraka ity no faharoa ambony indrindra amin'ny taona.Raha esorina ny fandrarana dia azo antoka fa hisy ny vola hivarotana.Tandremo ny tahiry sasany;
3. Ny volana jolay no vanim-potoana fampahafantarana lalina ny tatitra vonjimaika.Alohan'ny 15 Jolay, tokony hambara ny vinavinan'ny tatitra vonjimaika rehetra momba ny vatosoa;
Ao anatin'ny fotoana fohy dia mbola manana tombony ny karazana Baotuan.Izy ireo rahateo no safidy iraisan'ny ankamaroan'ny vola, ary kely ny mety hisian'ny kotroka;
Mifototra amin'ireo anton-javatra voalaza etsy ambony ireo, misy toerana ho an'ny fanitsiana midina eo amin'ny tsena, ary havoaka ihany koa ny tatitra semi-taona.Tokony hojerena ny tahirim-bolan'ny tsirairay miaraka amin'ny fisondrotana be eo amin'ny dingana voalohany ary latsaky ny andrasana amin'ny tatitra isan-taona;
Ara-stratejika, somary mitebiteby ny tsena.Na ny lafiny lava na ny fohy dia tsy nanao fifampiraharahana.Raha mbola tsy mandray anjara amin'ny fampitaovana birao avo lenta sy ny tahiry misy fironana miakatra maranitra izy ireo vao haingana, dia afaka misoroka ny loza lehibe indrindra izy ireo.Talohan'ny nipoiran'ny tsipika lehibe amin'ny tsena, ny fotoana fohy dia nitodika indrindra tamin'ny lohahevitra.Miaraka amin'ny fampahafantarana mitohy ny vinavinan'ny tatitra China Daily, ny vondron'ny tsipika fampisehoana dia afaka misafidy ihany koa ny handray anjara, ary ny toerana dia voafehy eo amin'ny 30%.
[sehatra mafana sy tahiry]
1. Fitantanam-bola lehibe
Ny maraina, nisokatra ambony kokoa ny tahirim-bolan'ny banky noho ny vaovao momba ny fahazoan-dàlana brokerage.Indrisy anefa fa nanao dingana lehibe loatra izy ireo ary tsy nanohana ny fahaizany.Avy eo dia nanomboka nitifitra izy ireo, izay nampiditra ny orinasa brokerage teny an-dalana;
Amin'ny ankapobeny, ity vaovao ity dia tokony ho an'ny banky.Rehefa dinihina tokoa, ny banky koa dia manana vokatra ara-bola be dia be;
Ankoatr'izay, ny fiantraikan'io vaovao io amin'ny orinasa fiantohana lehibe dia voafetra ihany, izay mbola ratsy kokoa ho an'ny orinasa madinika.Na izany aza, raha azo amboarina ny tahirim-bolan'ny banky ary mahazo fahazoan-dàlana amin'ny dingana manaraka ny orinasa madinika, dia tena tsara ho an'ny orinasa fiantohana izany;
Amin'izao fotoana izao, misy fahafahana bebe kokoa hahita ny firodanan'ny fiarovana.Amin'izao fotoana izao, ny tondro Shanghai dia miatrika eo akaikin'ny marika 3000, ary misy ny dihy farany amin'ny fitantanam-bola lehibe alohan'ny hahatongavan'ny tondro ho ambony;
Noho izany, ny orinasa fiantohana dia afaka mandinika ny fahafahana manangana toerana eo amin'ny tsipika afovoany;
Societe Generale Securities, ao anatin'ny tontolon'ny fitotonganan'ny orinasa securities ankehitriny, dia mitombo io tahiry io.Nanjavona ny fitarihana Shina ary nandao ny tena lokony.Ny volamena dia tsy hita afa-tsy rehefa avy nanasa fasika ny onja.Jereo aloha;
Everbright Securities, vondrona ara-bola ara-bola lehibe indrindra ao Shina manana fifaninanana feno tanteraka, dia nanao fanitsiana taorian'ny birao fahatelo.Araka ny fitenenana hoe "hatraiza ny halavan'ny horizontaly ary hatraiza ny haavon'ny vertika", tsapako fa tsy mbola tapitra ny fahafahan'ity tahiry ity;
Nentanin'ny fiverenan'ny valan'aretina periferika, lasa takelaka matanjaka indrindra ao amin'ireo tanàna roa ireo;
Ankehitriny, orinasa roa manao tavoahangy ara-pitsaboana, Zhengchuan Co., Ltd. sy Shandong Pharmaceutical vera, no fetra ara-barotra.Tena mahaliana ve izany?
Ny lojika hype dia tena tsotra.Mety ho diso ny vaksiny, fa ny tavoahangy dia tsy maintsy marina.Ohatrinona ny fiakaran'ny tavoahangy vaksiny?Andeha hojerentsika hoe firy ny olona eran-tany!
Ny tavoahangy fitaratra kely dia nitondra ny indostrian'ny fitaratra sinoa manontolo.Ity tavoahangy vaksiny ity dia vita amin'ny borosilicate antonony.Amin'izao fotoana izao, ny teknolojia Kaisheng dia afaka manamboatra fitaratra borosilicate antonony amin'ny ampahany.Tandremo tsara izany;
Tamin'ny mitataovovonana, nisy fiantraikany teo amin'ny fetra ara-barotra ihany koa ny varotra ara-pitsaboana Zhende, ny biolojia Wantai.Ny fironana amin'ny fotoana fohy dia tsara.Azonao atao ny mijery;
Tandremo tsara ny gadona sy ny fihodinana eo amin'ny takelaka.Ny ankamaroan'ny tahiry dia mifantoka indrindra amin'ny fironana.Andrasana fa ny takelaka pharmaceutique dia hitazona ny firafitry ny vondrona alohan'ny famoahana ny China Daily;
3. Teknolojia lehibe
Mbola fahafahana ara-drafitra mavitrika eo an-toerana izany.Raha ny vaovao dia mivoaka ny valin'ny tetikasa tolo-bidy amin'ny fotovoltaika amin'ny taona 2020, ary lehibe lavitra noho ny nantenaina ny tontalin'ny tontalin'izany, izay mitarika ho amin'ny fanamafisana ny sehatry ny photovoltaic;
Ity ihany koa ny takelaka misy fironana tsena tsara tarehy ankehitriny.Ny chips amin'ny varotra aloha dia azo ampitahaina amin'izany, fa amin'ny farany, ny chips dia miakatra sy midina;
Ny tena antony dia voafetra ny renivohitra tsena, ary ny fisintonana ny takelaka iray dia hiala amin'ny takelaka hafa.Noho izany, tsy asaina manenjika amin'ny ankapobeny isika;
Ao anatin'ny fotoana fohy, mbola misy ny fahafahan'ny tontonana sy ny semiconductor hanohy handinika;
Ohatra, mizara Longji, talen'ny semi-star, sns;
Farany, amin'ny resaka lalao, kolontsaina Caesar, karazana malaza, namboarina tamin'ny varotra tany am-boalohany, manondro ny fahalemen'ny takelaka ankehitriny;
Ao anatin'ny fotoana fohy, misy ny fanavahana lehibe amin'izao fotoana izao, izay mila karakaraina amim-pitandremana ao anatin'ny fotoana fohy.Andraso ny fiverenan'ny vola rehefa avy nampiato ny fihenam-bidy, ary diniho ny fotoana mety.
Fotoana fandefasana: Jan-18-2022
tavoahangy ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy diffuser volotara, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy vera labiera,